एक्सप्याट सेवाहरू | Law & More | आइन्डहोभेन र एम्स्टर्डम
के तपाईं नेदरल्याण्ड्समा विवादको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ? सम्पर्क गर्नुहोस् LAW & MORE
नेदरल्याण्ड्समा बस्दा र काम गर्दा, तपाईं एक प्रवासीको रूपमा धेरै कानूनी मुद्दाहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। जे भए पनि, डच कानून जटिल छ र यसले विभिन्न क्षेत्रहरू समेट्छ जुन प्राय: अनुबंधित वा मिल्छ। उदाहरण को लागी, एक एक्सप्याट को लागी, विभिन्न कानूनी प्रश्नहरु को क्षेत्र मा उठ्न सक्छ:
• अनुबंध कानून। उदाहरणका लागि जग्गा मालिकले तपाईंको पट्टा समाप्त गर्न सक्दछ वा खरीददारको रूपमा खरीद सम्झौता समाप्त गर्न सक्दछ? कुन (अतिरिक्त) सर्तहरू तपाईंको एक्सप्याट अनुबन्धसँग जोडिएको छ र तिनीहरूको मतलब के हो?
• रोजगार कानून। के तपाईं बिरामी संग सामना गर्न छ भने के गर्ने? एक प्रवासीको रूपमा, तपाईं एक छुट्टै भुक्तानी वा बेरोजगारी लाभको हकदार हुनुहुन्छ? के तपाईं डच डिसमिसल सुरक्षा तपाईंको मामलामा लागू हुन्छ जब तपाईंलाई बर्खास्तको सामना गर्नुपर्दा?
• दायित्व कानून। यदि निश्चित सम्झौताको उल्ल ?्घन भयो भने को जिम्मेवार छ? जब (कार्य सम्बन्धी) दुर्घटना हुन्छ तब तपाईं कसलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्छ? र यदि तपाइँको कार्यको परिणामस्वरूप अर्को व्यक्तिले क्षति भोग्छ भने के तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनुहुन्छ?
• अध्यागमन कानून। के तपाईंलाई नेदरल्याण्ड्समा बस्न वा काम गर्नको लागि निवास अनुमति चाहिन्छ? र यदि हो भने तपाईलाई के शर्तहरु भेट्नु पर्छ? र बेरोजगारीले तपाईंको निवास अनुमतिका लागि नतिजा के हुन्छ वा छैन?
"म एक वकील चाहान्छु जो सँधै पनि सप्ताहन्तमा मेरो लागि तयार छ।"
जुनसुकै कानुनी प्रश्न वा कार्यक्षेत्र तपाईले व्यवहार गरिरहनु भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई आफ्नो कानुनी स्थिति बारे सचेत हुनुहुन्छ। सबै पछि, तपाईं आश्चर्यको पछि (पछि) सामना गर्न चाहनुहुन्न। Law & More बहुभाषी वकिलहरूको समर्पित टोली छ जो अनुबन्ध कानून, दायित्व कानून, श्रम र अध्यागमन कानूनमा विशेषज्ञ छन् र तपाइँलाई तपाइँको कानुनी स्थितिको बारेमा जानकारी दिन सक्दछन्। थप रूपमा, ती तपाईंलाई मद्दत गर्न र सम्झौता जाँच गर्न वा तपाईंको निवास अनुमतिको लागि आवेदन दिन मद्दत गर्दछन्। के तपाईं अर्को क्षेत्र खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए हाम्रो विशेषज्ञता पृष्ठ हेर्नुहोस्, जसले हाम्रा सबै न्याय क्षेत्रहरू सूचीबद्ध गर्दछ।
के तपाईं नेदरल्याण्डमा विवादको सामना गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि पनि Law & More तिम्रो लागि छ जब पार्टीहरू द्वन्द्वको स्थितिमा छन्, अदालत जानु एउटा सामान्य र प्रायः द्रुत चाल हो। यद्यपि कानूनी कार्यवाहीले जहिले पनि राम्रो समाधान प्रदान गर्दैन र पार्टीहरू बीचको द्वन्द्वहरू अर्को तरिकामा राम्रो र अधिक प्रभावकारी ढ efficient्गले समाधान गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि मध्यस्थता मार्फत। हाम्रो वकिलहरूले शुरुको चरणदेखि विवादको अन्तिम चरणसम्म तपाईंलाई सहयोग गर्छन्। त्यसो गर्दा, उनीहरूले जोखिम र अवसरहरूको एक अग्रिम अनुमान बनाउँदछन्। दुबै केसमा, Law & More's वकिलहरु तब आफ्नो काम एक विचार गरी रणनीति मा आधारित छ कि तपाइँ संगै निर्धारित गरीएको छ।
के तपाईंसँग नेदरल्याण्डमा कानुनी समस्या छ, र के तपाईं यसलाई हल भएको हेर्न चाहानुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More। जहाँ धेरै वकिलहरु मात्र कानूनी ज्ञान र एक महत्वपूर्ण दृश्य प्रस्ताव, Law & More's वकिलहरु लाई केहि अतिरिक्त प्रदान गर्दछ। डच (प्रक्रियात्मक) कानूनको बारेमा हाम्रो ज्ञानको साथसाथ हामीसँग विस्तृत अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। हाम्रो कार्यालय यसको सेवाहरूको दायरा र प्रकृतिको सन्दर्भमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय होइन, तर उन्नत स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूको दायराको सन्दर्भमा पनि छ। हामी किन यसैले Law & More बुझ्नुहोस् एक्सट्याट्सले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू र व्यावहारिक र व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट तपाईंलाई सकेसम्म उत्तम रूपमा मद्दत गर्न सक्षम छन्।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ? Law & More आइन्डहोभनमा कानून फर्मको रूपमा तपाईका लागि गर्न सक्नुहुन्छ? हामीलाई फोन +१ ((०) 31०040 369० by० द्वारा सम्पर्क गर्नुहोस् वा हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस्: मि। टम मेभिस, अधिवक्ता Law & More - tom.meevis@lawandmore.nlmr। अधिकतम Hodak, अधिवक्ता & अधिक - maxim.hodak@lawandmore.nl